ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကို ဝမ်းနည်းစေခဲ့တဲ့ Notre Dame ဘုရားကျောင်း မီးလောင်မှူ - For her Myanmar
မြန်မာပြည်မှာ ပုဂံက အင်မတန်ကျော်ကြားတဲ့ ရှေးအမွေအနှစ်ဖြစ်သလို ပြင်သစ်မှာတော့ Notre Dame ဟာ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေ သိပ်ကိုဂုဏ်ယူကြတဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့မှာတော့ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေသာမက ကမ္ဘာကပါ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားတဲ့ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးတစ်ခု မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ၁၂ရာစုတုန်းက ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်ရဲ့ အခမ်းနားဆုံး ရှေးဗိသုကာ လက်ရာ၊ Notre Dame ဘုရားကျောင်းအိုကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းအိုကြီးကို မီးငြိမ်းသတ်ဖို့ မီးသတ်သမား၄၀၀ လွှတ်ခဲ့ပေမဲ့ ကားလမ်းပိတ်လို့ ကြန့်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ မီးလောင်မှုဟာ နာရီအတော်ကြာခဲ့ပြီး ဘုရားကျောင်းရဲ့ ပေ၃၀၀ အထိ အမြင့်ရှိတဲ့ ပြာသာဒ်ပုံစံ ထိပ်ချွန်ဟာ ပျက်ဆီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ အထဲက ရှေးဟောင်းရတနာတွေ လည်း ဆုံးရှုံးသွားလား အကောင်းအတိုင်း ကျန်ခဲ့လားဆိုတာ ခုထိ သေချာမသိရသေးပါဘူး။
ကံကောင်းလို့ အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးတော့ မီးမလောင်သွားခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက နှမြောတသဖြစ်ပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ပုဂံက အင်မတန်ကျော်ကြားတဲ့ ရှေးအမွေအနှစ်ဖြစ်သလို ပြင်သစ်မှာတော့ Notre Dame ဟာ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေ သိပ်ကိုဂုဏ်ယူကြတဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုပါ။ Notre Dame ဘုရားကျောင်းရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့….
သူဟာ Gothic Architecture လို့ခေါ်တဲ့ အလယ်ခေတ်တုန်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ရှေးဗိသုကာပညာ ကို သုံးထားပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၈၂ နှစ်ကြာမှ ဆောက်လို့ပြီးခဲ့ပါတယ်။
Notre Dame ဟာ အလယ်ခေတ်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ သာမန် ရိုမန်ကတ်သလစ်ဘုရားကျောင်းတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ သူဟာ ဆန်းသစ်တဲ့ ဗိသုကာဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့ အမိုးပေါင်းခုံးဆုံချက်တွေ (rib vault), တိုင်ကနေ နံရံကို ကန်ပြီး ဆောက်ထားတဲ့ ထောက်တိုင်အကွေးတွေ(flying buttress)၊ ရောင်စုံ နှင်းဆီခင်းသဏ္ဋာန် ပြတင်းပေါက်အကြီးကြီးတွေ အပြင် အတွင်းဘက်မှာလည်း ပန်းပုတွေ အများကြီးနဲ့ အလှဆင်ထားတာမို့ နာမည်ကြီးတဲ့ အနုပညာလက်ရာမြောက် အဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်ပါလာပါတယ်။
Related article >>> သမိုင်းထဲက ကာတီယာနဲ့ဆိုင်ယမ်(ထိုင်း)မင်းသားတို့ ရဲ့ ကြေကွဲစရာအချစ်ဇာတ်လမ်း
Notre Dame ဘုရားကျောင်းဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်ရဲ့ သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့…..
-၁၈၀၄ ခုနှစ်မှာ နပို လီယံဟာ ပြင်သစ်အင်ပါယာရဲ့ အရှင်သခင်အဖြစ် ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာ နန်းတက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
-ပြင်သစ်ဘုရင် Henry V ရဲ့ နှစ်ခြင်းခံတာကို ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာ လုပ်ခဲ့သလို သားဖြစ်သူ Henry VI ရဲ့ ထီးနန်းတက်ပွဲဟာလည်း ဒီထဲမှာပဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
-တတိယပြင်သစ်နိုင်ငံတော်က သမ္မတတွေရဲ့ အသုဘကို ဒီထဲမှာပဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
-ပြင်သစ်တွေဟာ ၁၉၄၄ခုနှစ်မှာ နာဇီတွေလက်က လွတ်မြောက်ခဲ့စဉ်က ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာ အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း Notre Dameဟာ ပြင်သစ်ရဲ့ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တစ်ခုသာမက ကမ္ဘာကပါ တန်ဖိုးထားရမယ့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် UNESCO က သတ်မှတ်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ကနေ အတုယူစရာကောင်းတာကတော့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း သိတဲ့ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေနဲ့ အစိုးရရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။ မီးလောင်ပြီး ၂ရက်အကြာမှာတင် ပြင်သစ်လူမျိုးတွေဟာ ဒီရှေးဘုရားကျောင်းကြီးကို ချက်ချင်းပြန်ဆောက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါပြီ။
ဒီအတွက်လည်း နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ချင်းစီက အလှူငွေတွေ ဝိုင်းဝန်းထည့်ကူကြမှာ ဖြစ်သလို ပြင်သစ်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး ဘီလျံနာမိသားစု၃စု ကလည်း ရန်ပုံငွေ သန်း၇၀၀ရအောင် ဝိုင်းဝန်းစုဆောင်းပေးကြဦးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်း နောက်၅နှစ်အတွင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ပြီးအောင်လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး နဂိုက Notre Dame ထက်တောင် ပိုလှစေရမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြင်သစ်လူမျိုးတွေရဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လိုတဲ့စိတ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ်ဟာ အတုယူစရာပါ ယောင်းတို့ရေ….
လက်နက်ကြီး ထိမှန်လို့ ပျက်စီးသွားရှာသော အက်ဒ်မင်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ မြောက်ဦးက ဘုရားတချို့လည်း ငြိမ်းချမ်းပါစေ…ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း…..
Reference links: cnn bbc buzzfeed.com
မွနျမာပွညျမှာ ပုဂံက အငျမတနျကြျောကွားတဲ့ ရှေးအမှအေနှဈဖွဈသလို ပွငျသဈမှာတော့ Notre Dame ဟာ ပွငျသဈလူမြိုးတှေ သိပျကိုဂုဏျယူကွတဲ့ သမိုငျးဝငျနရောတဈခုပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျလာနမှေ့ာတော့ ပွငျသဈလူမြိုးတှသော မက ကမ်ဘာကပါ အမွတျတနိုး တနျဖိုးထားတဲ့ သမိုငျးဝငျအဆောကျအဦးတဈခု မီးလောငျပကျြဆီးသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ ၁၂ရာစုတုနျးက ဆောကျလုပျခဲ့တဲ့ ပွငျသဈရဲ့ အခမျးနားဆုံး ရှေးဗိသုကာ လကျရာ၊ Notre Dame ဘုရားကြောငျးအို ကွီးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဘုရားကြောငျးအိုကွီးကို မီးငွိမျးသတျဖို့ မီးသတျသမား၄၀၀ လှတျခဲ့ပမေဲ့ ကားလမျးပိတျလို့ ကွနျ့ကွာသှားခဲ့ပါတယျ။ မီးလောငျမှုဟာ နာရီအတျောကွာခဲ့ပွီး ဘုရားကြောငျးရဲ့ ပေ၃၀၀ အထိ အမွငျ့ရှိတဲ့ ပွာသာဒျပုံစံ ထိပျခြှနျဟာ ပကျြဆီးသှားခဲ့ရပါတယျ။ အထဲက ရှေးဟောငျးရတနာတှေ လညျး ဆုံးရှုံးသှားလား အကောငျးအတိုငျး ကနျြခဲ့လားဆိုတာ ခုထိ သခြောမသိရသေးပါဘူး။
ကံကောငျးလို့ အဆောကျအဦတဈခုလုံးတော့ မီးမလောငျသှားခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီလိုမီးလောငျဆုံးရှုံးမှုကွောငျ့ တဈကမ်ဘာလုံးက နှမွောတသဖွဈပွီး ဝမျးနညျးကွကှေဲခဲ့ကွပါတယျ။မွနျမာပွညျမှာ ပုဂံက အငျမတနျကြျောကွားတဲ့ ရှေးအမှအေနှဈဖွဈသလို ပွငျသဈမှာတော့ Notre Dame ဟာ ပွငျသဈလူမြိုးတှေ သိပျကိုဂုဏျယူကွတဲ့ သမိုငျးဝငျနရောတဈခုပါ။
Notre Dame ဘုရားကြောငျးရဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့….သူဟာ Gothic Architecture လို့ချေါတဲ့ အလယျခတျေတုနျးက ပျေါပေါကျခဲ့တဲ့ ရှေးဗိသုကာပညာ ကို သုံးထားပွီး နှဈပေါငျး ၁၈၂ နှဈကွာမှ ဆောကျလို့ပွီးခဲ့ပါတယျ။
Related article >>> သမိုငျးထဲက ကာတီယာနဲ့ဆိုငျယမျ(ထိုငျး)မငျးသားတို့ ရဲ့ ကွကှေဲစရာအခဈြဇာတျလမျးး
Notre Dame ဟာ အလယျခတျေက ဆောကျခဲ့တဲ့ သာမနျ ရိုမနျကတျသလဈဘုရားကြောငျးတှနေဲ့ မတူပါဘူး။ သူဟာ ဆနျးသဈတဲ့ ဗိသုကာဒီဇိုငျးဖွဈတဲ့ အမိုးပေါငျးခုံးဆုံခကျြတှေ (rib vault), တိုငျကနေ နံရံကို ကနျပွီး ဆောကျထားတဲ့ ထောကျတိုငျအကှေးတှေ(flying buttress)၊ ရောငျစုံ နှငျးဆီခငျးသဏ်ဋာနျ ပွတငျးပေါကျအကွီးကွီးတှေ အပွငျ အတှငျးဘကျမှာလညျး ပနျးပုတှေ အမြားကွီးနဲ့ အလှဆငျထားတာမို့ နာမညျကွီးတဲ့ အနုပညာလကျရာမွောကျ အဆောကျအဦတဈခုဖွဈပါလာပါတယျ။
Notre Dame ဘုရားကြောငျးဟာ ခတျေအဆကျဆကျရဲ့ သမိုငျးဝငျအဖွဈအပကျြတှကေိုလညျး ကွုံတှခေဲ့ရပါသေးတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့…..
-၁၈၀၄ ခုနှဈမှာ နပို လီယံဟာ ပွငျသဈအငျပါယာရဲ့ အရှငျသခငျအဖွဈ ဒီဘုရားကြောငျးထဲမှာ နနျးတကျပှဲကငျြးပခဲ့ပါတယျ။
-ပွငျသဈဘုရငျ Henry V ရဲ့ နှဈခွငျးခံတာကို ဒီဘုရားကြောငျးထဲမှာ လုပျခဲ့သလို သားဖွဈသူ Henry VI ရဲ့ ထီးနနျးတကျပှဲဟာလညျး ဒီထဲမှာပဲကငျြးပခဲ့ပါတယျ။
-တတိယပွငျသဈနိုငျငံတျောက သမ်မတတှရေဲ့ အသုဘကို ဒီထဲမှာပဲ ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။
-ပွငျသဈတှဟော ၁၉၄၄ခုနှဈမှာ နာဇီတှလေကျက လှတျမွောကျခဲ့စဉျက ဒီဘုရားကြောငျးထဲမှာ အောငျပှဲခံခဲ့ပါတယျ။ဒါကွောငျ့လညျး Notre Dameဟာ ပွငျသဈရဲ့ အမြိုးသားယဉျကြေးမှု အမှအေနှဈတဈခုသာမက ကမ်ဘာကပါ တနျဖိုးထားရမယျ့ ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈအဖွဈ UNESCO က သတျမှတျတာ ခံခဲ့ရပါတယျ။
ဒီဖွဈရပျကနေ အတုယူစရာကောငျးတာကတော့ ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈကို တနျဖိုးထားရကောငျးမှနျး သိတဲ့ ပွငျသဈလူမြိုးတှနေဲ့ အစိုးရရဲ့ စိတျဓာတျပါပဲ။မီးလောငျပွီး ၂ရကျအကွာမှာတငျ ပွငျသဈလူမြိုးတှဟော ဒီရှေးဘုရားကြောငျးကွီးကို ခကျြခငျြးပွနျဆောကျပေးဖို့ တောငျးဆိုနကွေပါပွီ။ဒီအတှကျလညျး နိုငျငံသားတဈယောကျခငျြးစီက အလှူငှတှေေ ဝိုငျးဝနျးထညျ့ကူကွမှာ ဖွဈသလို ပွငျသဈရဲ့ အခမျြးသာဆုံး ဘီလြံနာမိသားစု၃စု ကလညျး ရနျပုံငှေ သနျး၇၀၀ရအောငျ ဝိုငျးဝနျးစုဆောငျးပေးကွဦးမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ အစိုးရကိုယျတိုငျကလညျး နောကျ၅နှဈအတှငျး ပွနျလညျတညျဆောကျခွငျးဖွဈစဉျကို ပွီးအောငျလုပျပေးမှာ ဖွဈပွီး နဂိုက Notre Dame ထကျတောငျ ပိုလှစရေမယျလို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယျ။ဒီဖွဈရပျကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ပွငျသဈလူမြိုးတှရေဲ့ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျလိုတဲ့စိတျ၊ ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈကို အမွတျတနိုးတနျဖိုးထားတဲ့ စိတျဟာ အတုယူစရာပါ ယောငျးတို့ရေ….လကျနကျကွီး ထိမှနျလို့ ပကျြစီးသှားရှာသော အကျဒျမငျတို့ရဲ့ ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈဖွဈတဲ့ မွောကျဦးက ဘုရားတခြို့လညျး ငွိမျးခမျြးပါစေ…ပွနျလညျပွုပွငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး…..
Tags: Burning, Knowledge, News, Notre Dame, World's Heritage
ခငျြးကို သုံးပွီး ဆံပငျသနျအောငျ လုပျကွမယျ...
Aye Mon Kyaw April 17, 2019